आर्किटेक्ट → ल्यान्डस्केप आर्किटेक्ट • आन्तरिक आर्किटेक्ट an एक वास्तुकारले कति कमाउँछ?
नक्शा वा रुपरेखा तयार पार्ने व्यक्ति भवन वा संरचनाको योजना र डिजाईनमा कार्य गर्दछ। वास्तुकारहरू उनीहरूका ग्राहकहरूको अवधारणा वा विचारहरूको विश्लेषण गर्न र तिनीहरूमा आधारित अद्वितीय निर्माण परियोजनाहरू सिर्जना गर्न सक्षम छन्।
आर्किटेक्टको काम फरक पर्न सक्दछ: कोही आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूको डिजाइनमा विशेषज्ञ छन्, कोही ल्याण्डस्केपि।, शहरी योजना, आन्तरिक र हरियाली डिजाइनमा केन्द्रित छन्। त्यहाँ वास्तुकलाको एउटा शाखा पनि छ जुन औद्योगिक सुविधाहरूसँग सम्बन्धित छ।
तल हामी दुई पेशालाई नजिकबाट हेर्दछौं - आन्तरिक डिजाइनर र ल्यान्डस्केप वास्तुकार। ती सबैको आ-आफ्नै विशेष विशेषताहरू हुन्छन् र बिभिन्न सीपहरू र ज्ञानको आवश्यक हुन्छ।
ल्यान्डस्केप आर्किटेक्टले बाहिरी रिक्त स्थानहरू सुशोभित गर्न सक्दछ, तर उनीहरूको अधिकांश समय योजनाहरू सिर्जना गर्न र परिमार्जन गर्न, लागत अनुमान तयार गर्ने र ग्राहकहरूलाई भेट्ने कार्यालयहरूमा खर्च गर्दछन्। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि परिदृश्य आर्किटेक्टहरूले आफ्नो कार्यस्थलमा वा तिनीहरूको परियोजनाको विकास भइरहेको साइटमा समय खर्च गर्दैनन्।
अधिकांश परिदृश्य आर्किटेक्ट वास्तु र ईन्जिनियरि। उद्योगहरूमा काम गर्छन्। तिनीहरू मध्ये केही परिदृश्य आर्किटेक्चरसँग काम गर्ने सेवा कम्पनीहरूको लागि काम गर्छन्।
ल्यान्डस्केप आर्किटेक्टको कौशल र प्रतिस्पर्धा
सफल हुनको लागि, ल्यान्डस्केप आर्किटेक्टसँग निम्न नरम कौशल र व्यक्तिगत गुणहरू हुनुपर्दछ:
रचनात्मकता - यसले तपाईंलाई सुन्दर बाहिरी रिक्त स्थानहरू डिजाइन गर्न अनुमति दिनेछ जुन कार्यशील पनि हुनेछ
सक्रिय सुन्न - यसले तपाईंलाई ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू र इच्छाहरू बुझ्न अनुमति दिनेछ
मौखिक संचार - वास्तुकार आफ्नो ग्राहकहरु लाई जानकारी दिन सक्षम हुनु पर्छ
आलोचनात्मक सोच - ल्याण्डस्केप आर्किटेक्टले निर्णय लिनु पर्छ र समस्याहरू समाधान गर्नु आवश्यक छ, र कडा आलोचनात्मक सोच कौशलले सम्भावित समाधानहरू पहिचान गर्दछ र त्यसपछि तिनीहरूलाई उत्तम छनौट गर्नु अघि तिनीहरूको मूल्याate्कन गर्दछ।
कम्प्युटर साक्षरता - टेक्नोलोजीले यस कार्यमा ठूलो भूमिका खेल्छ, मोडेल तयारीको लागि CADD र भौगोलिक सूचना प्रणालीहरू सहित सफ्टवेयर सहित
परिदृश्य आर्किटेक्टको कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू
यस काममा ग्राहकहरू, ईन्जिनियरहरू र आर्किटेक्टहरू भेट्नु र समस्याहरूको सम्भावित समाधानको रूपरेखा बनाउन र आवश्यकताहरू पहिचान गर्न यी सम्बन्धहरूलाई पोषण गर्नु समावेश छ।
काम गर्ने क्रममा ड्रेनेज र ऊर्जा उपलब्धता जस्ता वातावरणीय कारकहरू पनि विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। कम्प्यूटर एडेड डिजाइन र उत्पादन सफ्टवेयर (CADD) को प्रयोग गरेर योजना योजनाहरूको ग्राफिक प्रतिनिधित्व र साइट योजनाको तयारी बिना कुनै पार्क सिर्जना गर्न सकिँदैन। ल्यान्डस्केप आर्किटेक्टले लागत अनुमान पनि तयार गर्दछ र परियोजना बजेटको पर्यवेक्षण गर्दछ। यो आवश्यक छैन कि डेस्क काम हो।
आवासीय भवनहरूको डिजाइन
आन्तरिक डिजाइनरहरू ग्राहकहरूको साथ उनीहरूको आवश्यकताहरू र एक विशेष कोठा वा सम्पूर्ण घरको लागि इच्छाको पहिचान गर्न नजिकबाट काम गर्दछन्। केहि केसहरूमा, ती नयाँ निर्माण परियोजनाको लागि डिजाइन विशेषज्ञता प्रदान गर्छन्। उनीहरूले भवन भित्र वा बाहिर एउटा बस्ने ठाउँ बनाउन सहयोग गर्दछ। अधिकतर अर्डरहरूमा ग्राहकहरूलाई धेरै पटक भेट्नु, एउटा डिजाइन सिर्जना गर्ने, र फर्नीचर विकल्पहरू प्रदान गर्ने, रंग नमूनाहरू, फ्लोरिंग र प्रकाश चयन समावेश गर्दछ।
अपार्टमेन्ट डिजाइनको रूपमा, व्यावसायिक डिजाइनमा उही प्रक्रिया समावेश छ तर ठूलो मात्रामा। वाणिज्यिक आन्तरिक डिजाइनरहरू कार्यक्षमता, स्थिरता, ग्राहक ब्रान्ड छवि र व्यापार वातावरण कारकहरू मूल्या evalu्कन गर्दछन्। परियोजनाहरू ग्राहक बजेट र समय आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। केहि अवस्थाहरूमा, व्यावसायिक डिजाइनरहरूले एक डिजाइन सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ जुन स्थापनाको बखत कामलाई जारी राख्न अनुमति दिन्छ।
एउटा पोर्टफोलियो केवल कागजात हो कि छवि, पाठ, संरचना र ढाँचा मार्फत एक पेशेवर कहानी दिन्छ। त्यहाँ यति धेरै प्रकारका मानिस छन् जुन यस पेशाको अभ्यास गरिरहेका छन्। पोर्टफोलियो पूर्ण डिजिटल, पूर्ण अनुरूप, वा दुईको संयोजन हुन सक्छ। तपाईंको कम्पनीको मानव संसाधन विभागलाई वेब पोर्टल मार्फत वितरित मात्र डिजिटल सबमिशनहरू आवश्यक पर्दछ।
एक राम्रो पोर्टफोलियो मा मुख्य रूप मा राम्रो परियोजनाहरु को हुन्छ। यदि त्यहाँ डिजाइनर वा आर्किटेक्टको खातामा उनीहरू अधिक छन् भने उत्तम। यस पेशेमा अनुभवले ठूलो भूमिका खेल्छ।
वास्तुकारहरूले घरहरू, भवनहरू र अन्य वस्तुहरू डिजाइन गर्छन्। यी डिजाइनहरू नयाँ भवनहरू, नवीकरण, नवीकरण र अवस्थित सुविधाहरूको विस्तारको लागि प्रयोग गरिन्छ। उनीहरूले पुन: डिजाइन, पुनर्निर्माण, र क्षतिग्रस्त वा क्षतिग्रस्त भवनहरू, सुरक्षित भवनहरू, बस्ती र स्मारकहरू सहितको मर्मतको प्रक्रियामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। वास्तुकार सुरुवाती डिजाइन, रेखाचित्र र प्रस्ताव मोडेल देखि ग्राहक आवश्यकताहरुमा परिवर्तन गर्न सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रियामा सामेल छ। वास्तुकार सक्रिय रूपमा अन्य निर्माण पेशेवरहरूसँग पूरै प्रोजेक्टमा सहकार्य गर्दछ, महत्वपूर्ण इन्पुट तल उत्कृष्ट परीक्षणको लागि प्रदान गर्दछ, तल अन्तिम निरीक्षण र स्वीकृति सम्म।
एक वास्तुकारले कति कमाउँछ?
ज्याला मुख्य रूपमा रोजगारीको स्थान र अनुभवको स्तरमा निर्भर हुन्छ। नयाँ कुशल वास्तुकारहरूले धेरै गहिरो काम गर्न सक्दछ, जस्तै परियोजनाहरू चित्रण गर्ने, परियोजना साइटहरू भ्रमण गर्ने र परियोजनाका लागि जिम्मेदार आर्किटेक्टलाई रिपोर्ट गर्ने।
एक स्वरोजगार आर्किटेक्टको रूपमा तपाइँ कामका घण्टा र परियोजना छनोटको सर्तमा स्वतन्त्रताको निश्चित डिग्रीमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यालय काम र वास्तविक डिजाइन को मात्रा बढ्दो अनुभव र विश्वास संग बढ्छ।
जब अनुभव बढ्दै जान्छ र जिम्मेवारीहरू परिवर्तन हुन्छन, तलब पनि बढ्छ। त्यसकारण, कुनै वास्तुकारले कति कमाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट भन्न गाह्रो छ।
नक्शा वा रुपरेखा तयार पार्ने व्यक्तिनिर्माण वास्तुकारCzęstochowa को वास्तुकारआर्किटेक्ट katowiceल्यान्डस्केप आर्किटेक्टक्राको वास्तुकारडु architect्गा आर्किटेक्टआर्किटेक्ट लुब्लिनवास्तुकार नयाँ बजारआर्किटेक्ट poznańआर्किटेक्ट Szczecinआर्किटेक्ट वारसाआन्तरिक डिजाइनरक्राकोको आन्तरिक आर्किटेक्टआन्तरिक आर्किटेक्ट डु boat्गाआन्तरिक डिजाइनर poznańSzczecin को आन्तरिक डिजाइनरआन्तरिक डिजाइनर वारसाआन्तरिक आर्किटेक्ट क्रोक्लाआर्किटेक्ट व्रोकवावेतन आर्किटेक्टएक आन्तरिक डिजाइनरले कति कमाउँछआवश्यक वास्तुकारआर्किटेक्ट पोर्टफोलियोआर्किटेक्ट कामल्यान्डस्केप आर्किटेक्ट कामआर्किटेक्ट टेक्निशियनआर्किटेक्ट पेशा